Bambalwa ukuphatha ukuthola indawo ukuzijabulisa. ngokwehlukahlukana kwabo kuvula amathuba omkhulu sokuzilibazisa, kodwa Cosha ethize akusebenzi ngaso sonke isikhathi. Indawo yokudlela "mackerel" inikeza amasevisi zayo kubathandi nesimnandi nokuzola. Kodwa ukuze siqonde ukuthi kuyazuzisa ngempela ukuwela umbundu, kumelwe ufunde isihloko ngezansi.
Kunzima ukusho okuthile mayelana isikhungo, ngemva kokuba akazange wavakashela. Kodwa kuvela ukuthi lapho ekhetha indawo uphumule, ungakwazi nsí ngenxa semali ulwazi lwezempilo kuyadida. Nokho, zikhona izikhungo efakazelwe, njengokuthi "mackerel" yokudlela, okuyinto ukujabulisa kungenzeka kokuhlala ezimnandi ezizungeze emangalisayo. Itholakala endaweni ethakazelisayo. Kusukela leli phuzu, izivakashi ungakwazi ukujabulela ubuhle ihlathi ngakolunye uhlangothi kanti amanzi eGulf of Finland - ngakolunye. Kutholwe a drive ngomzuzu-40 kusuka Petersburg, indlu kunikeza umuzwa ezolile futhi yokuntuleka isikhathi, big umsindo edolobheni. Kuyaphawuleka ukuthi "mackerel" - yokudlela-ehhotela, okusho ukuthi endaweni enjalo Ungahlala ebusuku ekuseni, zithokozise inkomishi yekhofi. Thola iholide at: emzaneni Komarovo, Seaside Highway 496. Le restaurant ivuliwe kusuka 11 ekuseni kuya ku-11 ntambama ngezimpelasonto 10 ngezinsuku zeviki. Isheduli Summer kuhlukile kancane, ngokuvumela izivakashi ukuvakashela "mackerel" kusukela 11 am kuya phakathi kwamabili.
Umsuka kule ndawo ithatha kusuka 2005, lapho iminyango yayo yokuqala wavula kulabo abafisa bazijabulise. Ngalesi eside isikhathi yokudlela "mackerel" lalilokhu ngcono, wandisa amathuba ukuzijabulisa inikeza amasevisi amasha. Manje yokudlela kuyinto ilingane nesakhiwo esinezitezi ezimbili, lapho izivakashi angalali ehholo esiyinhloko abantu 120, ekamelweni elincane 25 futhi ithala esikhulu ehlobo nge izihlalo 120. uyibuka uphezulu ubuhle obukhulu bomthombo umuntu ongakabi ngilinqobile izwe bemvelo angeke sehluleke uthinte nesivakashi olindele kunazo. Labo abafika imoto yakhe, amasevisi kanye yokupaka khulula. I "mackerel" yokudlela ngokuvamile umculo bukhoma ngabaculi owaziwa futhi abadlali. Futhi uma iculo bephoqeleka ukuya umdanso, akekho azenqabelayo, ngoba umdanso phansi esikoleni futhi enikeziwe. Kuleli qophelo, thina wanakekela izidingo izivakashi abasebancane kakhulu, ngubani uzokwazi nijabula ekhoneni a enezingane ezinezidingo ezikhethekile noma ku lokudlala ngaphansi kokuqondisa zilaliswe umzanyana, kuyilapho abazali ujabulele ukudla kwabo kulo iviyo nomunye.
Ukwenza isikhungo ufeza indima ebalulekile okuvelayo evakashile. Yingakho zonke indawo enjalo kufanele abe isitayela sawo ezindaweni eziphakathi nezwe, futhi uyogcwala "chips 'esiyingqayizivele. "Mackerel" - sokudlela ne isimo ethokomele futhi ekhululekile. Ngaphakathi amahholo yayo ukuvumela ukuba ngehlise umoya futhi ungacabangi izinkinga zansuku zonke. Ngesisekelo design yabo imibono ekusebenzeni babekwa, induduzo kanye no frills. Umbala scheme okulula nsundu nomhlophe, ukusetshenziswa kabanzi ukhuni, izakhi ezithakazelisayo Loft-isitayela, namafasitela amakhulu ukuvumela emini kahle - konke lokhu kwenza kube yokuchitha isizungu ezimnandi. On ithala ehlobo ungabona nenhle Ababazi bakha izihlalo kanye ingilazi amatafula. Lapho uhleli ngemuva nabo inkomishi yekhofi esandleni bese ubuka amanzi eGulf of Finland, ngingathanda ayeke umzuzwana, nihlale khona isikhathi eside ngangokunokwenzeka.
yokudlela emihle noma cha - ke anganquma izivakashi kuphela ngemva uzame ekhishini. "Mackerel" - yokudlela (Petersburg), ogama imenyu inikeza izitsha of cuisine European futhi Italian. Ukudla okukhethayo mkhulu ngempela, futhi inguqulo ngayinye ezimele, isidlo kakhulu, injabulo ukudla zazo kuqinisekile. Esikhathini yokudlela "mackerel" Wenza kahle ngaphandle ezigugile sushi, pizza kanye isaladi "uKhesari". Ngisho ngaphandle ezifana izitsha adumile ku izivakashi imenyu ukuthola into entsha futhi sikhulu esihlwabusayo. Konke kusuka isaladi nge uBrie ushizi, u-beetroot kanye eliphakathi kwe, ukhilimu isobho nge imfanzi corn ziphethe okumnandi okuzenzela ice cream ne gooseberries kanye mascarpone noma isicinganani cherry, lavender futhi basil, bayowukhumbula izivakashi njengoba best ukuthi kwakumelwe bazame . Ngezimpelasonto, yokudlela, izivakashi ungakwazi ukujabulela isiphuzo aphume samovar. Ukuze nemicimbi ekhethekile, isikhungo enikeziwe imenyu ahlukene enkampani.
"Mackerel" - yokudlela ukuthi ufuna ukuya uthanda okuningi ngokuvamile. Lezi zindawo ngokushesha kuyanda, ngoba ukusungulwa ezinhle ukuthi ilungele elula yokuzijabulisa, kanye amadili, abaningi owufunayo. Le ndawo yokudlela yonke imininingwane kwenza ukuhlala emnandi. Indawo eyingqayizivele izikhungo, uhlobo enikeza izivakashi zayo benze inkonzo enhle, cuisine kakhulu - ngezinye izikhathi konke okudingayo ukuze uzizwe ngendlela entsha sha. Ngo sikhungo kwanele nje ukuza, futhi lonke kuzoqinisekisa abasebenzi bakhe.
Indawo yokudlela "mackerel", ukubuyekezwa enganikeza isithombe wangempela kwenzekani ngaphakathi kwezindonga zawo, wenza konke ukuze wenze izivakashi bazizwa kahle. Izivakashi bathi akuvamile uvakashele izindawo ezinjalo. Lesi sikhungo emkhathini amazing, kanye ezihlinzekwa kwenza kube ivelele nenqwaba yabanye. Ezinye bathandile ikakhulukazi ekhishini, elinye - isimo, eyesithathu - ". UMkhosi isobho" ekhethekile izipesheli, ezifana, isibonelo, Wonke umuntu ubona yokudlela "mackerel" ohlangothini ukuthi iningi edonsela futhi kubangela umnyango ukuze uyivule futhi. Kodwa konke lokhu-ke uthi lokhu yesikhungo kufanele uvakashele nakanjani.
Ubuhlungu ngaphansi kwembambo efanele
Hilling amazambane tillers - saving time umzamo
Chlamydia ezingabantu: ukudluliswa endleleni, izimpawu kanye nokwelashwa